နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြရန် ပြည?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြရန် ပြည??
နိုင်ငံရေးပြဿ နာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်း နိုင်ရေးအတွက်ယုံကြည်မှု တည် ဆောက်ရန်အားလုံးဝိုင်းဝန်း ကူညီ ကြဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ဧပြီ ၂၉ရက်၊ နေပြည်တော် တွင်ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ် တော်အစည်းအဝေး၌ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားရာ ၎င်းက အထက် ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်သည် စစ်မှန် သည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူရေးနှင့် တိုင်း ရင်းသားအခွင့်အရေးများ အပြည့် အဝရရှိရေးသည် အထူးအရေးကြီး ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်က ပြောသည်။
”စစ်မှန်တဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်း ရေးရဖို့အတွက် ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့် အရေးများ အပြည့်အဝရရှိရေးတို့ ဟာ အထူးပင်အရေးကြီးလှပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံ ရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဆွေးနွေးဖြေရှင်း နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက် နိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ တိုက် တွန်းလိုပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြော သည်။ ယင်းအပြင် ပြည်သူအားကိုး ရသည့် လွှတ်တော်ဖြစ်စေရေး အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များကြိုးပမ်းကြဖို့လည်း ၎င်းက တိုက်တွန်းသည်။
”လွှတ်တော်များ ခိုင်မာအား ကောင်းပြီး ပြည်သူကပိုမိုအား ကိုးလာဖို့အတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ဥပဒေပြုရေး တာဝန်တွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ကြဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ မိမိတို့ကိုယ်စားပြုတဲ့ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင် ရဲ့တာဝန်ဟာကြီးမားပြီး စနစ်တ ကျချင့်ချိန်စဉ်းစား ဝေဖန်သုံးသပ်၊ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှသာ မှန်ကန် တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ရလဒ်ကောင်း တွေထွက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဥပဒေပြုရေး အပါအဝင် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက် တဲ့နေရာမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနဲ့အညီစံနမူနာပြ ဆောင်ရွက် ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ မိမိတို့ နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွေကို တတ်နိုင်သမျှ စိစစ်ထိန်းညှိပြီး ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ လွှတ်တော်ဖြစ်စေရေး၊ နိုင်ငံတော် နဲ့ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားအ တွက်အားထားပြုရတဲ့ လွှတ်တော် ဖြစ်စေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယနေ့ ပြန်လည်စတင်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ် မြောက်အစည်းအဝေးကာလအတွင်း ဆွေးနွေးဆောက်ရွက်ကြ မည့်ဥပဒေကြမ်း (၁၄)ခုရှိကြောင်း၊ အသင့်ဖြစ်အဆို(၁၆)ခု၊ အသင့်ဖြစ် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၂၃၇)ခုရှိ ကြောင်း၊ မေးခွန်း၊ အဆိုများနှင့် ဥပဒေကြမ်းတို့ကို ဝန်ကြီးဌာနများ ၏အခြေအနေနှင့်ရှိသည့် အချိန် ပေါ်မူတည်ကာမျှမျှတတ ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပတ် မိုးပျံရထားလမ်း စီမံကိန်း နိုင်ငံတော်အဆင့် အတည်ပြုချက်ရပါက ၂ဝ၂၇ ခုနှစ်ဝန??
နိုင်ငံတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု ၂ဝ၁၈ ကုန်သည်အထိ သိသာစွာ ကျဆင်းသွားခြင်း မရှိသေး
ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် မန်းတိုင်းအတွင်း အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း ၁၉၈ ကျောင်း ယာယီ ပိတ်ထားရ
လုပ်ငန်းများ အလုံးစုံ ရပ်ဆိုင်း မသွားစေရန် ယခုနှစ် ငါးမဖမ်းရ ကာလတွင် ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းသင်္ဘော ၂